igumbi eliphakathi esixekweni - I-Airbnb
igumbi eliphakathi esixekweni
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguHotel Real Catedral
UHotel Real Catedral yi-Superhost
IHotel Real Catedral isembindini wedolophu, inamagumbi okulala ane-wifi nendawo yokupaka esimahla, neeyure eziyi-24 zokwamkelwa. Amagumbi aneTV, igumbi lokuhlambela labucala kunye nomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu. Ukuba uyasityelela kwinkampani, buza ukuba singakuhlawulisa njani. Amagumbi alungele ukuhlala kwezoshishino.
-I-Hotel Real Catedral inika undwendwe ithuba lokuphila amava ekoloni kunye nembali ethembekileyo. UMongameli weRiphabliki uBenito Juárez wahlala apha ngexesha awaqhubela ngalo amaFrentshi; kule ndawo uPorfirio Diaz wamkelekile, ngoxa uAlvaro OŘón ethetha nabantu abasuka kwibhalkhoni ephakathi yehotele.
- Eli gumbi linegumbi lokuhlambela labucala elinezinto onokuzisebenzisa ezifumanekayo.
- Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu egumbini.
- Ukuba uyasityelela ngenxa yezizathu zomsebenzi singayibhatala indawo yokuhlala, buza ngenkqubo yethu yokubhatala ngaphambi kokubhukisha ukuze sikwazi ukukunceda.
IHotel Real Catedral isembindini wedolophu, kwimizuzu nje eyi-5 ukusuka kwi-Archaeological Zone. Ukuba isizathu sakho kukutyelela umsebenzi, iPaki Yezimboni, iMiguelueluelalgo Refliday (Pemex) kunye neCFE zikumgama nje wemizuzu eyi-10, sinendawo yokupaka esimahla.
Umbuki zindwendwe ngu- Hotel Real Catedral
Ulwamkelo lweyure ezingama-24.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tula de Allende